အိပ်ယာမ၀င်ခင် ၀မ်းဗိုက်က အဆီကျအောင် သဘာဝဖျော်ရည်ကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်မယ်
ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဆားကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
တရုတ်-မြန်မာ ပူးတွဲပြီး သမုဒ္ဒရာပြင် သုတေသန ပြုလုပ်
စံချိန်တင်လစာ တစ်ပတ်ပေါင် ၅၀၅၀၀၀နဲ့ မန်ယူကို ဆန်းချက်ဇ် ပြောင်းတော့မယ်
၈.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မင်းဘူးခရိုင်မှ ဦးစီးပြီး မင်းဘူးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခန်းမတွင် ကျင်းပရာ တိုင်းကော်မတီဝင် ဦးကျော်သူဦး၊ တိုင်းအရံကော်မတီ ဦးအေးသူ၊ ခရိုင်ဥက္ကဌ …
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လူငယ်နှင့်အမျိုးသမီးရေးရာ မွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၁၈)
(၉.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့ နံနက် (၈း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဗဟိုကော်မတီဝင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တိုင်းကော်မတီဝင် ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင်မှ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ နှောင့်နှေးရပ်တန့်ကျဆင်း သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းများ ယခင်/ယခုပြည်တွင်း/ပြည်ပ …
ပဲခူးမြို့နယ် ချမ်းသာကုန်းကျေးရွာ၌ ချမ်းသာကုန်း ဓမ္မရက္ခိတကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာနနာယကဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ကုဏ္ဍလမဟာထေရ်၏ အန္တိမဈာပနအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ အန္တိမဈာပနပူဇော်ပွဲတွင် ပဲခူးမြို့နယ် …
သီ​ပေါမြို့နယ်​ ပြညိခိုင်​ဖြိုးပါတီရုံးခန်းမတွင်​ ၆.၁.၂၀၁၈ရက်နေ့ နံနက်​ (၀၉း၃၀) အချိန်​က ကျင်းပရာ ​ရှေးဦးစွာ မြို့နယ်​ပါတီဥက္ကဌ ဦး​အောင်​​အောင်​က ၂၀၂၀ ပါတီ​အောင်​နိုင်​​ရေးအတွက်​ ပါတီဝင်​များအားလုံး ကြိုးပမ်း …
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရပ်/ကျေးပါတီဥက္ကဌ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရပ်/ကျေးပါတီဥက္ကဌ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၇ . ၁ . ၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင် …
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on အိပ်ယာမ၀င်ခင် ၀မ်းဗိုက်က အဆီကျအောင် သဘာဝဖျော်ရည်ကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်မယ်
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဆားကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ဘေးဘောင်တွင် FINGERPRINT နည်းပညာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည့် တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်းကို MEIZU မှ မိတ်ဆက်ပြသ
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on REMAX NOTEBOOK ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်မည်
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆင်တူသော ယူနီဖောင်းများကို မဝတ်ဆင်ရန် ပြည်ထဲရေးသတိပေး
ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များကို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ဆင်တူသော ယူနီဖောင်းများ မဝတ်ဆင်ရန်နှင့် ဝတ်ဆင်ပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန် ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ လတ်တလောတွင် ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အသင်း အဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံ ရေးအဖွဲ့အစည်း များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများဝတ် ဆင်အသုံးပြုနေသည် ဟု သိရှိ ထားကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် ညက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ခြောက်လတာဘတ်ဂျက် ကျပ်ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ကျော် သုံးစွဲရန်လျာထား
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု မြန်မာ-တရုတ် သဘောတူညီချက်ရရှိ
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on တရုတ်-မြန်မာ ပူးတွဲပြီး သမုဒ္ဒရာပြင် သုတေသန ပြုလုပ်
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on မြောက်ကိုရီးယားကို ဒဏ်ခတ်မှု ပိုမိုပြုလုပ်ရေး စဉ်းစားကြရန် သဘောတူ
ဆေးဝါးအတုတွေကြောင့် အာဖရိကမှာ တနှစ် လူတသိန်းခန့် သေဆုံး
January 18, 2018 USDP 2016 Comments Off on ဆေးဝါးအတုတွေကြောင့် အာဖရိကမှာ တနှစ် လူတသိန်းခန့် သေဆုံး
January 12, 2018 USDP 2016 Comments Off on ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် ကျွန်းစုအနီး တရုတ်စစ်သင်္ဘော ခုတ်မောင်းခြင်းကို ဂျပန် သတိပေး
သြစတြေးလျအိုးပင်းမှာ ယူကရိန်းတင်းနစ်မယ် မာတာကော့စ်ယွက်က သြစတြေးလျက ရိုဂေါ်စကာကို အနိုင်ယူပြီး တတိယအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ကစာသမားအဖြစ် စံချိန်တင်သွားပါတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ …
အာဆင်နယ်အသင်း တိုက်စစ်မှူး အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်ဟာ ဗြိတိန်စံချိန်တင်လစာနဲ့ မန်ယူကို ပြောင်းဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ဟာ တစ်ပတ်ကို ဆုကြေးနဲ့ အခြေခံလစာ …
အားကစားလောကရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်မားဆုံး ဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Laureus World Sportsman of the Year ဆုအတွက် နောက်ဆုံး အမည်စာရင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာ အမျိုးသားဆုအတွက် ကစားသမား …
၀ိန်းရူနီကြောင့် အဲဗာတန်ကို ပြောင်းလာခဲ့တာလို့ ၀ဲလ်ကော့ ဆို
အာဆင်နယ်ကနေ အဲဗာတန်အသင်းဆီ ပေါင်သန်း ၂၀နဲ့ ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ ၀ဲလ်ကော့က သူဒီကို ပြောင်းလာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ရူနီရှိနေခြင်းက အဓိကကျခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၀ဲလ်ကော့ဟာ အဲဗာတန်နဲ့ ၃ …
ဘရာဇီးအသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားဆွတ်ခူးခဲ့ဖူးတဲ့ ရော်နယ်ဒင်ဟိုဟာ ကစားသမားဘ၀ကနေ အနားယူပြီလို့ ကစားသမားရဲ့အကိုနဲ့ အေးဂျင့်လည်းဖြစ်တဲ့သူက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ဒင်ညိုဟာ ၂၀၁၅မှာ ဖလူမင်နိစ်အသင်းကနေထွက်ခွာကတည်းက ဘယ်အသင်းမှာမှကစားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အခုအချိန်မှအနားယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ၊ …
သီချင်းတွေ သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ GARMIN ရဲ့ပထမဆုံး ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန် FORERUNNER 645 MUSIC
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Apple Watch, Fitbit Ionic တို့နဲ့အပြိုင် Garmin ရဲ့ Vivoactive3လည်း ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Vivoactive3မှာ …
ကြိုးမဲ့နားကြပ်တွေရဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သုံးဆမြှင့်တင်နိုင်မယ့် QUALCOMM ချစ်ပ်အသစ်
ကြိုးမဲ့ headphone တွေမှာ စိတ်ညစ်ညူးစရာ အဓိကပြဿနာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက ဆူညံသံ တော်တော်များများ ဖြစ်ပေါ်စေတာနဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်း တာရှည်မခံတာ ဖြစ်ပါတယ်း။ Qualcomm အနေနဲ့ အဲဒီပြဿနာကို …
PRICE – 235,000 ဒီဇိုင်း ပုံစံဒီဇိုင်းကတော့ လှပသေသပ်တဲ့ဖုန်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘေးဘောင်တွေ ပါးလွှာတဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့် ပုံစံမျိုး တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ …